पुनःनिर्माण सोलुको स्रोत बाँडफाँड, कुन स्थानीय तहलाई के कति ? - Shikhar Post Shikhar Post
पुनःनिर्माण सोलुको स्रोत बाँडफाँड, कुन स्थानीय तहलाई के कति ?
सोलुखुम्बु । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, जिल्ला आयोजना इकाइ (शिक्षा) तर्फको स्रोत बाँडफाँडका लागि बसेको स्थानीय सरकार प्रमुख सहभागी वैठकले पुनःनिर्माण शिर्षकका स्रोतको बाँडफाँड गरेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७६–७७ र ०७७–७८ मा निर्माण गरिने ४ कोठे आरसिसी भवन, २ र ३ कोठे ट्रस भवन, शौचालय र खानेपानीको संरचना निर्माणको लागि ८ स्थानीय तहमा बाँडफाँड गरिएको हो ।
प्रकाशित मिति : शनिबार, २० बैशाख २०७७ ०८:२७